हङकङमा संक्रमण घट्यो:३,७०६ जना संक्रमित,कार्यकारी प्रमुखको उमेदवार को? - HongKong Khabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २०, २०७८ समय: २३:१८:४५
अप्रिल ३ तारीख आइतबार कोभिड-१९ केसको विवरण
.रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि केस संख्या: ३,७०६
.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १,८३२
.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १,८७७
.पाँचौ लहरबाट संक्रमित संख्या : १,१५८,७९१
.आयातित केस संख्या : १० जना
जसमध्ये ६ जना क्रमशः साउथ कोरिया,फ्रान्स ,नेदरल्यान्ड , स्विजरल्याण्ड,सिंगापुर र थाइल्यान्डबाट आएका थिए । अन्य चार जना आयातितमा २ जना क्याबिन क्रीउ मेम्बर पनि परेका थिए ।
.हस्पिटल अथोरिटिले पुष्ठि गरेको केस संख्या: २९३
.डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले पुष्टि गरेको केस संख्या : २५०
.टेस्टिङ सेन्टर र प्राइभेट ल्यावबाट आएको केस संख्या:१,२८९
.१,२३७ केसको जिनोम सिकुएन्स (आनुवांशिक अनुक्रम मिलाउनु) गर्दा डेल्टा केस शून्य थान भेटियो १,२२५ वटा केसमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटियो। १२ वटा केस भाइरल लोड कम भएका कारण भेरिएन्ट सुनिश्चित हुन सकेन।
.हङकङको कुल मृत्यु संख्या : ७,९५९
.आज रिपोर्ट भएको मृत्यु हुनेको संख्या : १११
.हङकङको मृत्यु दर: ०.६९%
.खोप नलाएका मृतक विरामीको मृत्यु दर :३.९%
.हाल अस्पतालमा रहेका बिरामीको संख्या : १०,००९
.हाल क्रीटिकल बिरामीको संख्या : ९
.सिरियस बिरामीको संख्या : १७
.आइसियु रहेका संख्या : ७८
.गत २४ घन्टामा बितेका मृतक संख्या : ९६
.मृत्यु हुने मानिस: ४९ जना पुरुष ४७ जना महिला
.मृत्यु हुनेको उमेर समुह : ४३ वर्ष देखि १०९ वर्ष
.नर्सिङ होमबाट आएको मृत्यु संख्या : ५१
.खोप नलाएका मृतकको संख्या : ५९
.तीन वटा खोप लगाएका मृतकको संख्या : १
.दोस्रो खोप लगाएका मृतक संख्या : ८
.एक खोप लगाएका मृतक संख्या : २८
.६५ वर्ष क्रस गरेका मृतकको संख्या : ९०
कम उमेरका मृतक
.एक ४३ वर्षका पुरुष
.एक ५० वर्षकि महिला
.५८ वर्षकि महिला
.५० वर्षकि महिला
.सबै मृतक कोहि क्यान्सर रोगी कोहि दीर्घ रोगी थिए ।
.१५ जनाको मृत्यु ढिलो रिपोर्ट भएको थियो जसमा १२ जना पुरुष र ३ जना महिला वर्ष ३८ देखि ९९ वर्ष बिचका थिए ।
.डिस्चार्ज संख्या : ८७१ ( गत २४ घन्टामा)
.अस्पताल भर्ना हुन आएकालाई परिक्षण गर्दा ५ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो र ७ जना नजिकका संपर्कमा परेका थिए ।
.अस्पतालका संक्रमित कर्मचारीको संख्या : २१,२३९
.निको भएर ड्युटीमा फर्किएकाको संख्या :१९,०९४
कार्यकारी प्रमुख क्यारी लाम र चुनाव
कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले यस पटकको कार्यकारी प्रमुख पदको लागि हुने चुनावमा पुन: उम्मेद्बारी दिने नदिने बारे आफ्नो निर्णय केही समय भित्र नै घोषणा गर्ने बताएकी छिन।
मे महिनाको ८ तारीख हङकङको चिफ एक्जेकेटिव पदको लागि निर्वाचन हुदैछ । र उक्त पदको लागि उम्मेदवारी मनोनयन अवधि अप्रिल ३ तारीख देखि खुला भएको छ। मनोनयन अवधि शुरु भएको पहिलो दिन आइतबार सम्पन्न महामारीविरुद्धको दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा अप्रासंगिक प्रश्न सोधिएको भन्दै लामले आफुले उम्मेद्बारी दिने या नदिने त्यसको निर्णय केहि दिन पछि सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन।
कार्यकारी प्रमुखमा उठेका उमेदवारलाई सामाजिक जमघट गर्न छुट दिने घोषणा अप्रिल २ तारीख शनिबार अधिकारीहरूले गरेका थिए । उम्मेदवारले मनोनयनका लागि निर्वाचन समितिका सदस्यहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा प्रचार–प्रसार पनि गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो छुट आवश्यक भएको लामले बताइन ।
गत वर्ष मे महिनामा भएको निर्वाचन नियमावली संशोधनले कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवार बन्नको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने योग्यता (थ्रेसहोल्ड) पनि बढाइएको जानकारी लामले दिइन।
मान्यता प्राप्त उम्मेदवार बन्नको लागि संबंधित उमेदवारले १,५०० सदस्यीय निर्वाचन समितिका कम्तिमा १८८ जनाको मनोनयन प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। र पाँच निर्वाचन समिति उपक्षेत्र प्रत्येकबाट कम्तीमा १५ सदस्यले मनोनयन गरेको हुनुपर्छ ।
प्रत्येक निर्वाचन समितिका सदस्यले एक जना मात्र उम्मेदवार मनोनयन गर्न सक्नेछ र उम्मेदवारी फिर्ता वा खारेज गर्न पाइने छैन।
सीई(चिफ एक्जेकेटिव) चुनावका उम्मेदवारले सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्र आफ्नो उम्मेदवारी फारमहरू बुझाउन सक्छन।
चिफ सेक्रेटरी जोन लि कार्यकारी प्रमुखको उमेदवार ?
स्रोतअनुसार हङकङ प्रशासनका मुख्य सचिव जोन ली का-चिउले आगामी हुने कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनमा उम्मेद्बारी दिने सम्भावना उच्च रहेको छ।
हङकङ स्ट्यान्डर्डको सह प्रकाशन सिंग ताओ डेलीले यस पटकको निर्वाचनमा जोन ली अन्यथा वित्तीय सचिव पल चान मो-पोले उम्मेद्बारी दिने आकलन अगाडि सारेको छ जसमा लीको सामेल हुने सम्भावना धेरै भएको बताइएको छ।
स्रोतले जनाए अनुसार कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गराउन उत्तरदायी रहेको अङ्ग १,५०० सदस्यीय निर्वाचन समितिको प्रमुख संयोजकमा पूर्व कार्यकारी प्रमुख सि वाइ ल्यङ (ल्यङ चुन-यिङ) को चयन हुनेछ ।
आवश्यक परेको खण्डमा समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी प्रमुख संयोजकको हुने गर्दछ। कानुनी रूपमा हल हुन असंभ निर्वाचनसंग सम्बन्धित विषयहरु उठेमा मुल संयोजकले बैठक बोलाएर निकास दिन सक्दछ। यस मानेमा केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय जन काँग्रेसको स्थायी समितिको ध्यानाकर्षण जरुरी हुन्न ।
ल्यङ वा अन्यमा पूर्व सीई तुङ ची-ह्वा मात्र उक्त पदका लागि योग्य छन। दुवै जना चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका उपाध्यक्ष पनि हुन । तर तुङको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छैन । अहिलेको अवस्थामा संयोजक नियुक्तिमा ल्यङको विकल्प छैन ।
६४ वर्षका जोन ली सन २०२१ साल जुन महिनादेखि प्रशासकीय मुख्य सचिवको रूपमा कार्यरत छन।
उनी सन १९७७ मा हङकङ प्रहरी बलमा प्रोबेशनरी इन्स्पेक्टरका रूपमा भर्ना भएका थिए। उहाँ सन १९९७ जुलाईमा प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक, मे २००३ मा सहायक आयुक्त, जनवरी २००७ मा वरिष्ठ सहायक आयुक्त र सेप्टेम्बर २०१० मा उपायुक्तमा बढुवा भएका थिए ।
ली सेप्टेम्बर २०१२ मा सुरक्षा उपसचिवमा नियुक्त भएका थिए । जुलाई २०१७ देखि जुन २०२१ सम्म सुरक्षा सचिवको रूपमा ऊनी कार्यरत थिए।
सन २०१९ मा हङकङ अशान्त रहेकोे बेला उनले ब्यूरो अन्तर्गतका छवटा अनुशासन सेवा विभाग र दुई अतिरिक्त फोर्सलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
हङकङमा ४,४७५ जना संक्रमित,९९ जनाको मृत्यु ,मास्क र कीट वितरण,एक्सइ भेरिएन्ट ,चौथो डोज खोप